I-Red Cedar Hideaway
Crescent Head, New South Wales, i-Australia
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Cassie And Jeff
I-Red Cedar Hideaway inepulani elivulekile eligcwele umoya eligcwele ukukhanya elenziwe ngezingodo zase-Australia. Indlu iyi-amble yemizuzu emi-5 eCrescent Head Point, Main Beach, Killick Creek, izitolo kanye ne-Country Club edolobhaneni laseCrescent Head. Kuwuhambo lwemizuzu emi-3 ukuya e-Backbeach ngendlela yasehlathini etholakala ezansi nengadi yethu.
Sinikeza ubhasikidi wasekuseni okusanhlamvu, iyogathi nezithelo ezintsha, kanye nojamu nebhotela. Ukwamukela izivakashi zethu sishiya ibhodlela lewayini ne-brie nama-crackers.
Indlu inezindawo zokupaka ezingaphansi komgwaqo ezicashile zezimoto ezi-2. Indlu inekhishi/indawo yokuhlala enkulu evulekile, enomoya futhi efakwe kahle. Kunamakamelo okulala ama-2 amakhulu akhiwe kuma-wardrobes. Igumbi elilodwa lokulala linombhede olingana nendlovukazi kanti elinye linombhede wabantu ababili nombhede owodwa. Igumbi lokuphumula libheke kuvulandi ongemuva lapho izoso yegesi nendawo yokudlela yangaphandle ihlinzekwa khona ukuze izivakashi zijabulele ukudla kusihlwa okuzolile kanye nesidlo sasekuseni sijabulela izinkulungwane zezinyoni ezigcwele esihlahleni somsedari esibomvu esihlinzeka ngomthunzi nesiphephelo.
Ilineni lekhwalithi lifakiwe kanye nezitsha, okokusika, i-microwave, i-BabyQ webber, umshini wekhofi, umshini wokuwasha olayisha ngaphambili, i-ayina nebhodi loku-ayina, ukudla kwangaphandle nezinto ezidingekayo, i-TV, isiqandisi.
4.94(53 okushiwo abanye)
4.94 · 53 okushiwo abanye
I-Crescent Head iyidolobhana elijabulisayo elinezitolo eziningi zekhofi kanye nezindawo zokudlela. Amabhishi ethu adume ngobuhle bawo obumsulwa futhi abatshuzi abavela kuwo wonke umhlaba bajabulela amanzi alapha. Ezweni lethu elimatasa lokujaha nokuphithizela i-Crescent Head ihlala iyindawo yomlingo yabo bonke abafisa ukuzipholela isikhashana futhi baphefumule.
Ibungazwe ngu-Cassie And Jeff
Singaba lapha ukuze sinibingelele futhi sikubonise indlu yethu kodwa sinepulazi elicashile enhla nentshonalanga lapho sithanda ukubalekela khona noma nini lapho kungenzeka. Sinesisefo esingukhiye lapho izihambeli zingazingenisa khona. Singathintwa ngesigijimi noma i-imeyili uma kukhona okusikhathazayo futhi singabuyela endaweni phakathi kwehora.
Singaba lapha ukuze sinibingelele futhi sikubonise indlu yethu kodwa sinepulazi elicashile enhla nentshonalanga lapho sithanda ukubalekela khona noma nini lapho kungenzeka. Sinesis…
UCassie And Jeff Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-6009
Hlola ezinye izinketho ezise- Crescent Head namaphethelo